Khabiir Magacaabay SADDEXDII Ciyaartoy Ee Arsenal Sababta Ugu Ahaa Guul-darradii Man City U Xambaarisay Xalay | Laacibnet.net
Khabiir Magacaabay SADDEXDII Ciyaartoy Ee Arsenal Sababta Ugu Ahaa Guul-darradii Man City U Xambaarisay Xalay
Jamie Redknapp ayaa dhalleecayn u jeediyey saddex ka mid ah ciyaartoyda Arsenal oo uu tilmaamay inay la degeen kooxdooda intii ay socotay ciyaartii Manchester City ay ku garaacday xalay.
Gunners ayaa guul-darro loogu xambaariyey garoonkeeda, iyadoo uu gool madax ahaa ka dhaliyey Raheem Sterling laba daqiiqadood ciyaarta oo socota, waxaanay Man City guushaas ku dhigtay rikoodh ah inay 18 ciyaarood oo xidhiidh ah badiyeen.
Ka sokow guusha, Arsenal ayaa heshay fursado ay goolal ku dhashan karaysay, laakiin waxay iska khasaariyeen jaanisyadoodii iyagoo sidoo kalena ay hurdeen xiddigaha afka hore oo ay ahayd inay shaqeeyaan.
Xogta kulanka lagaga ururiyey ayaa waxay muujinaysaa in ciyaartoyda Arsenal ay hal mar oo kaliya kubadda ku toogteen goolka Manchester City iyagoo kubadda ku aaddinaya, waxaana si adag u shaqaynayay difaacyahannada kooxda martida ahad, gaar ahaan Ruben Dias oo xiddiga garoonka loo doortay.
Weerarka Arsenal ayay kusoo wada bilowdeen Pierre-Emerick Aubameyang iyo Nicolas Pepe, hase yeeshee waxa khadka dhexe ka ciyaarayay oo kubadda soo gaadhsiinayay Martin Odegaard. Saddexdan ciyaartoy ayaa lix baas oo kaliya ka helay duleedka Arsenal, waxaanay taasi muujinaysaa in aanay wax khatar ah oo la taaban karo ku haynin Citizens.
Jamie Redknapp oo ka hadlayay ciyaartaas, ayaa waxa uu eedeeyey Abameyang, Pepe iyo Odegard oo uu xusay in bandhiggooda aadka u liitay uu sabab u noqday guul-darrada kooxooda, waxaanu yidhi: “Bal eeg Aubameyang; Aubameyang waa lasoo dhaafay waqtigii uu wanaagsanaa. Wuxuu soo qaatay marxalado uu saddexley dhaliyo.
“Marka aan daawo mararka qaarkood, waxa uu u muuqanayaa inuu lumiyey awooddiisii. Markii u horreysay ee uu Premier League yimid, waxaad arkaysay isagoo orod ku dhaafaya dadka. Waqtigiisii Dortmund, waxaad arkaysay isagoo orod ku dhaafaya dadka. Haddana waxaan arkayaa ciyaartoy u muuqda inuu iska tuurayo fursad kasta.”
Jamie Redknapp waxa uu amaanay xiddigaha da’da yar ee Arsenal, waxaanu yidhi: “Bukayo Saka iyo Emile Smith Rowe ayaa ah kuwa ugu wanaagsan. Waa ciyaaartoyda aan dareemayo inay u baahan yihiin inay tallaabooyin hore usoo qaadaan.”
Ugu dambayntii, waxa uu Jamie Redknapp iyagana liiday labada ciyaartoy ee Pepe iyo Odegaard oo uu tilmaamay in ay la’ yihiin xeeladdii ay ku muujin lahaayeen kartidooda ciyaareed, gaar ahaan kulankii Man City.